Basanta Basnet: 2014
Posted by Basanta Basnet at 1:09 AM No comments:
सबै र नेता विदेशै लागे
संविधान चैं खोई भन हौ- झम्के गुलेली ।'
सिस्नुपानी नेपालका कलाकारको व्यंग्यबाण झेल्न 'भाषाविद्' तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नीलो रंगको ज्याकेटमाथि कालो रंगको बाक्लो कोट खापेर प्रज्ञा प्रतिष्ठान डबलीमा उक्लिए । देउसेको खस्रो कलात्मक 'ड्रोन'बाट बच्न हो कि ! पृथ्वीमा कसैले ज्याकेटमाथि कोट लगाएको यो पहिलो घटना हुन सक्छ ।
बत्ती र उज्यालोको चाड तिहारको दोस्रो दिनको साँझ, बुधबार कमलादी बाहिर लोडसेडिङ थियो । देश हाँक्ने नेताहरू सिस्नुपानी खप्न एकेडेमीको ल्याम्पपोस्टमुनि अडेस लागेर बसेका थिए । हास्यव्यंग्य देउसी खप्न आउनेमा नेतामात्रै थिएनन्, विभिन्न क्षेत्रका नाइकेहरू र सर्वसाधारण पनि । त्यहाँ थिए- ह्याटि्रकवाला सभामुख, संविधानसभाका 'स्थायी अध्यक्ष' सुवास नेम्वाङ, प्रधानमन्त्री दौडका '१७ औं धावक' रामचन्द्र पौडेल, सधैं गम्भीर भएझैं गर्ने प्रदीप ज्ञवाली र अग्नि खरेल, 'कारिन्दाका नाइके' लीलामणि पौडेल, 'नोटमा सही गर्ने' गभर्नर युवराज खतिवडा । 'भएको कुरा कम लेख्ने, देखेभन्दा धेरै लेख्ने' पत्रकारहरूलाई पनि देउसेले छयाँस्न के छाड्थे ! घुमाई घुमाई ठोके ।
सय वर्ष पुग्न पाँच कम सत्यमोहन जोशी जोशमा मञ्च उक्लिए । अनि चर्को ध्वनिमा भट्टयाउन थाले-
Posted by Basanta Basnet at 11:13 PM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 11:11 PM No comments:
चारआलीदेखि उत्तर छड्कँदा तपाईं मेची राजमार्गभरि 'नेपाल हाम्रो देश हो, लिम्बुवान हाम्रो घर हो' लेखिएका भित्ताहरू देख्न सक्नुहुन्छ । सार्वजनिक चौतारा, चोकदेखि ल्याम्पपोस्टहरूमा 'लिम्बुवानमा तपाईंलाई स्वागत छ' लेखेको देखिन्छ । इटहरीदेखि पूर्व र उत्तरतिर हरेक सवारी साधन 'जय लिम्बुवान' प्लेट बोकेर दगुुरिरहन्छन् ।
दुई वर्ष अघिसम्म यो बाटो हिँड्दा चन्द्रसूर्य झन्डाभन्दा विलकुल भिन्न 'राष्ट्रिय झन्डा' गाड्ने पल्लो किरात लिम्बुवान पार्टीको चहलपहल देख्न सकिन्थ्यो । विखण्डनकारी गतिविधिमा
उत्रेको भन्दै प्रशासनले कारबाही थालेसँगै उक्त दल निष्त्रिmय हुन थालेको थियो । लिम्बुवानका गतिविधिलाई अवलोकन गरिरहेका पाँचथर हाङ्गुमका शिक्षक गोविन्दराज कुरुम्बाङ भन्छन्, 'आकारमा सानो भए पनि प्रचारमा अरू लिम्बुवान पार्टीलाई उछिनेको त्यो दलको गतिविधि दोस्रो संविधानसभा चुनावयता शून्यप्रायः छ ।'
त्यो प्रचारको ठाउँ लिएको छ संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालले । टुक्राटुक्रामा लिम्बुवान दलहरू छरिएसँगै निभ्न लागेको लिम्बुवान-लडाइँको दियोमा तेल थप्न र नयाँ सलेदो हाल्न यसका नेताहरू कस्सिएका छन् । लिम्बुवानको आन्दोलनलाई उठाउने योजनाअनुरूप उनीहरूले पाँच लिम्बुवान दलहरूलाई मिलाएर गत असोज ४ गते बिर्तामोडमा घोषणासभा गरे । त्यो सभा साउन २० गते धनकुटाको भेडेटारमा उनीहरू एकीकृत हुने निर्णयको प्रतिफल थियो । किरात ज्योतिषी चन्द्रकुमार शेर्माले थमाएको तामाको मानोमा ऐतिहासिक गढी विजयपुरको माटो छोएर नयाँ पार्टीको शपथ लिनेहरूमा थिए- मञ्चसम्बद्ध संघीय लोकतान्त्रिक राज्य परिषद् अध्यक्ष कुमार लिङदेन, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङा, लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष वीर नेम्वाङ, संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी अध्यक्ष कमल छाराहाङ र लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष रामभक्त कुरुम्बाङ ।
Posted by Basanta Basnet at 1:27 AM 1 comment:
Posted by Basanta Basnet at 10:21 PM No comments:
पुराना सडकमध्येको राजधानीको नयाँ सडक हिजोआज 'न्युरोड'का रूपमा प्रचलित छ। यही सडकको भूगोलपार्कनेर अवस्थित पीपलबोट नेपाली साहित्य र संस्कृतिको अभेद्य किल्ला बन्न पुगेको छ। यो बूढो रूखको सियाल ताप्ने लेखक, कविका पिढी दरपिढी बदलिइसके, तर छहारी अझै उस्तै छ। काठमाडौंको घडीमा साँझ ५ बज्नासाथ स्रष्टाहरू यो रूखको फेदमा जम्मा भइसक्छन्। त्यसपछि सुरु हुन्छ, चियापान, प्रशंसा, छेडखानी र भत्र्सना। काठमाडौंमा अन्यत्र पनि केही गौंडाहरू छन्, जहाँ कवि, लेखक दिनहुँ आपसमा भेट्छन्। बागबजार, भृकुटीमण्डप, अनामनगर, पुरानो बानेश्वरजस्ता ठाउँमा लेखकहरू सिर्जनात्मक विमर्श गर्छन्। यीमध्ये सर्वाधिक चर्चा र नाम पीपलबोटकै छ।
Posted by Basanta Basnet at 10:07 PM No comments:
नेपाली समाज र राजनीतिका विषयमा लेख्दै र चिन्तन गर्दै आएका सीके लाल पेसाले इन्जिनियर हुन् । तर, समाजलाई हेर्ने उनको दृष्टिकोण गणीतीय मात्र छैन । उनीसँग मूलधारदेखि सामाजिक नैतिकता र बुद्धिको निर्माणलगायतका विषयमा यज्ञश र बसन्त बस्नेतले गरेको कुराकानी :
तपाईंको सुरुवाती बेलाको पढाइसम्बन्धी सम्झना कस्तो छ ?
म स्कुलमा पढ्दासम्म गर्मीमा छुट्टी लामो हुन्थ्यो । अलिअलि खेतमा काम गर्ने समयबाहेक फिल्म हेर्न जानेजस्ता विकल्प थिएनन् । मेरा दाइ बीए पढ्नुहुन्थ्यो, उहाँको पुस्तक संकलन राम्रै थियो । यसो पढ्दै गएको, रस बस्दो रहेछ । सजिलोसँग किन्न पाउने अखबारहरू, 'आर्यावर्त' भन्ने हिन्दीमा, 'इन्डियन नेसन' अंग्रेजीमा निस्कन्थ्यो । 'प्रदीप' भन्ने अखबार निस्किन्थ्यो । हिन्दुस्तान, दिनमान, सरिता, कादम्बिनी, नवनीत पनि । जासुसी दुनियाँका किताब आउँथ्यो । जे हात पर्छ, पढ्ने बानी लाग्यो । अगाथा क्रिस्टीजस्ता लेखकका पुस्तक हेरिन्थ्यो । नबुझे पनि हिन्दी, अंग्रेजी शब्दकोश अघिल्तिर राखेर पढ्ने काम सुरु गरियो । सानै उमेरदेखि पढ्ने रस बस्यो ।
Posted by Basanta Basnet at 6:39 AM No comments:
एकान्तको अजिङ्गरले कतिको सताउँछ? वैरागी काइँलालाई @basantabasnet को प्रश्न। लाइभ हेर्नुस् http://www.pahilopost.com/content/-646.html …
From Pahilo Post. कहाँ गए ती दिन? अभि सुवेदीलाई सोध्दै @basantabasnet लाइभ हेर्नुस्- http://www.pahilopost.com/content/-646.html …
मदन पुरस्कार विजेता राधा पौडेलस“ग संवादमा । उनको कुराकानी र प्रतिबद्धता राम्रो लाग्यो ।
Posted by Basanta Basnet at 6:33 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 10:55 PM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 10:54 PM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 8:11 PM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 1:38 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 1:35 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 1:24 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 1:17 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 12:58 AM No comments:
पहिचानवादी दलहरू सदन र सडक दुवैतिर आक्रामक हुँदै गर्दा पहिलो संविधानसभाको दियोमा धिपधिपमात्रै बाँकी थियो। निभ्ने बेलाको बत्ती चहकिलो बल्छ भन्ने नेपाली उखान छ। सभाभित्र जनजाति सभासदहरू 'ककस' मार्फत दलीय नेतृत्वलाई आफ्ना मुद्दा अनुमोदन गराउन च्यापिरहेका थिए। सभा बाहिर दुई कुनामा 'पहिचानवादी' र 'पहिचानविरोधी' का गगनभेदी नारा नयाँबानेश्वरका सडकमा घाम नअस्ताउन्जेल गुन्जिइरहन्थे। नयाँ संविधानको प्रसवमा छट्पटिइरहेको संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना, राज्यशक्तिको बाँडफाँटजस्ता मुद्दा छिन्न नसकेर २०६९ जेठ १४ गते मध्यरात बिनासंविधान तुहियो।
पहिचानको मुद्दा चर्काइरहेको एमाओवादी संंविधानसभा विघटनलगत्तै फुट्यो। एमाले फुटेर संघीय समाजवादी दल बन्यो। कांग्रेस, एमाओवादीबाट समेत नेताहरू यस पार्टीमा आउन थाले। मधेसवादी दलहरू जुट्नै नसक्नेगरी यसअघि नै छिन्नभिन्न भइसकेका थिए। राजनीतिको कम्पासले कुन दिशा देखाउने हो, यकिन गर्न कठिन हुँदै गयो।
संवत्सँगै राजनीतिक माहोल बदल्न कति पनि समय लागेन। पहिचानवादी राजनीतिको झर्दो पारोबीच अर्को वर्ष अर्थात् २०७० मंसिर ४ गते संविधानसभाको दोस्रो चुनावले शक्तिसन्तुलन बदल्यो। एकल जातीय पहिचानको मुद्दामा अलमल बाँकी रहे पनि कमसेकम एमाओवादीले त्यसप्रति कताकति सहानुभूति राखेकै थियो। ऊ आफैं सिट संख्यामा ठूलो अन्तरसहित तेस्रो दलमा खुम्चियो। कत्रो शक्ति बन्ला भनी उत्सुकतापूर्वक हेरिएको संघीय समाजवादी पार्टी नेपालले प्रत्यक्षतर्फ एउटै सिट पनि जितेन। कांग्रेस र एमाले क्रमश: पहिलो र दोस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा उदाए। 'पहिचानविरोधी' भनिएको राप्रपा नेपाल आँकलनविपरीत उनीहरूलाई उछिन्दै बेन्चको चौथो लहरमा बस्न पुग्यो। कतिपय जनजातीय समूहले मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग मिलेर संविधानसभा चुनाव बहिष्कारको निर्णय लिएका थिए। अहिले उनीहरू राजनीतिक 'पहिचान' को लडाइँ कुन विन्दुबाट सुरु गर्ने भन्ने अलमलमा छन्।
Posted by Basanta Basnet at 12:51 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 12:50 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 12:46 AM No comments:
सुनकोशी नदी थुन्नेगरी एक महिनाअघि गएको पहिरोले सिर्जेको विनाशकारी यो तालको नाम के राख्ने होला - सम्बोधनका लागि आजसम्म कुनै नाम बनेको छैन । हुन त केही 'विज्ञहरू' यसैलाई ताल कायम राखेर पर्यटन उद्योग गर्न सुझाउ“छन् । स्थानीयमा भने आफन्त र छिमेकीको प्राण लिने यो ज्यानमारा कृत्रिम ताल जोगाउने कुरै रहर देखिन्न ।
मांखा, राम्चे, टेकानपुर र धुस्कुनका १८ घरहरू डुबाउ“दै माझमा ५० मिटर गहिरो जमेको यो ताल खोल्न नेपाली सेना कस्सिएको छ । तर उसको काम गर्राईप्रति स्थानीयहरू गुनासोमात्रै होइन, शंका पनि गर्न थालेका छन् । वारिपारि चर्को आक्रोश छ- 'कत्ति ढिलो काम गरेको -'
मानसरोवर हि“डेका दक्षिण भारतीय तमिलनाडु तर्ीथयात्री हुन् या काठमाडौैं झरेका चिनिया“ पर्यटक, सबै यही नवजात् ताल पृष्ठभागमा पर्नेगरी तस्बिर खिचाउन त“छाडमछाड गर्दैछन् । तिनलाई सायद थाहा होला नहोला, साउन १७ गते राति तीन बजे पहिरो र डुबानमा परी यहा“का चार गाविसका २३ स्थानीयको ज्यान गएको थियो । बेपत्ता हुने, अंगभंग हुनेको संख्या अझै यकिन छैन । दर्जनौंको बास उठाउने जुरे पहिरोले थुनेको सुनकोसीबाट जबर्जस्त निर्मित तालले यो पहाडी इलाकाका स्थानीयवासीका लागि भने कत्ति पनि शोभा दिएको छैन ।
Posted by Basanta Basnet at 12:44 AM No comments:
जुरेको पहिराले अरनिको राजमार्ग थुनेको छ । पहिरो गएको भीरबाट घरिघरि ढुंगा खसिरहन्छ । हिडा हिडै कुन बेला ढिस्को खसेर भारीसहित पुरिदेला भन्ने डर छ । तर यही पहिरो सिन्धुपाल्चोकका किसानका लागि एक महिनायता जीवनशैली बन्न थालेको छ । उनीहरू अस्तिसम्म किसानमात्रै थिए, जुरेको पहिराले उनीहरूलाई नयाँ पहिचान दिएको छ, भरियाको ।
पहिले अरू काम गरेर दैनिक पाँच सय रुपैयाँ मुस्किलले कमाउने स्थानीयबासी एक महिनायता भारी बोकेरै रोज तीन हजारसम्म बसाउन थालेका छन् । तर गाती- २ सिन्धुपाल्चोकका २८ वषर्ीय बिर्ख श्रेष्ठ भन्छन्, 'यही पहिरोका कारण ९९ वटा घाटा खपिएको छ, एउटा नाफा आएर के गर्नु । कमाइ बरु घटोस्, हामीलाई बाटो आएकै ठीक छ ।'
Posted by Basanta Basnet at 12:40 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 5:03 AM No comments:
'बीपी कोइराला बा“चेको भए २०४६ सालको जनआन्दोलन हुने थिएन भनी धेरैले भन्ने गरेको सुनिएको छ । मेरा विचारमा बीपीले बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलन त गर्थे तर वाममोर्चातिर सहकार्य गर्ने भने थिएनन् । उनको बुझाइमा यसो गर्दा नेपाली कांग्रेसको परिचयमाथि प्रश्नचिह्न लाग्ने हुन्थ्यो । आजका सर्न्दर्भमा त्यो कति व्यावहारिक हुन्थ्यो, त्यो भन्न सक्ने कुरा भएन । गणेशमानसिंहले व्यावहारिकताको बाटो लिए र जनआन्दोलनमा वामशक्तिलाई पनि समावेश गरे ।'
प्राध्यापक लोकराज बराल ः 'रोमाञ्चित जीवन', पृष्ठ २६१
नेपाली कांग्रेसनिकट भनी चिनिएका प्राध्यापक बरालको हालै प्रकाशित आत्मकथाभित्रको यो मूल्यांकनले वामपन्थीलाई हर्ेर्ने बीपी-दृष्टिकोण झल्काउ“छ । कम्युनिस्टइतरका प्रगतिशील शक्तिसमेत वामपन्थी हुनसक्ने ठान्ने उनी आफूलाई वामपन्थी ठान्थे, तर कम्युनिस्टस“ग किमार्थ सहकार्य गर्ने पक्षमा थिएनन् । नेकपा-माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यका अनुसार बीपी आफूलाई मार्क्सवादी हु“ भनी बेलाबखत यसै भन्नलाई भनिदिन्थे, तर मार्क्सवादको नामै सुन्न नचाहने स्वभाव थियो ।
'बीपीमा राजनीतिक कट्टरता थियो । लोकतन्त्रका लागि लडिरहनुभयो, तर लोकतन्त्रमा कम्युनिस्टको अस्तित्व स्वीकार्न हिच्किचाउनुहुन्थ्यो,' यी 'कट्टर मार्क्सवादी' भन्छन्, 'बीपीले जान्नुभएन ।
Posted by Basanta Basnet at 1:58 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 4:57 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 4:50 AM No comments:
पूर्वी नयाँ दिल्लीको लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेसन आसपास क्रिसमसको कुनै रमझम देखिँदैन। जस्तो कि, दिल्लीका अरू जुनसुकै बजार डिसेम्बर अन्तिम साता सान्ता क्लसको पर्खाइमा सजिएका छन्। मध्यरातको लक्ष्मीनगर शोकसन्तप्त टोलझैं देखिन्छ, मानौं उसले भर्खरै प्रिय मान्छे गुमाएको छ।
विजयचोक, मेनमार्केटको कठ्यांग्रिदो चिसोमा मध्यरात दुई नेपाली भुइँमा काठको मोटो लठ्ठी टकटक बजार्दै हिँडिरहेका छन्। तीन दशकयता हरेक रात चौकीदारी गरिरहेका यी 'गोर्खा बहादुर'को कथा सुन्दै गर्दा भारतको राजधानीमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक जाडो छ। आज लक्ष्मीनगरमा बिजुलीबत्ती पनि छैन।
राति एक बजे। बाजुरा, जयबागेश्वरी–१ पिपलगाउँका शेरबहादुर थापा मेन मार्केट गल्लीमा १०२ मार्काको बिँडी सल्काइरहेका छन्। मुटु काम्ने सिरेटोमा यही बिँडी सहारा बनेको छ। एक हुल कुकुर बेस्मारी भुकिरहेछन्। छेउछाउ अरू पनि नेपाली 'बहादुर'हरू डन्डाले भुइँ हिर्काउँदै ठमठम हिँडिरहेछन्।
मोटो ज्याकेट लगाएका, पाल्पाली ढाका टोपीलाई दोहोरो मफलरले मोहोरेका यी चौकीदारले ३५ हिउँदबर्खा यही दिल्लीका सडक, कोलोनी र गल्लीमा बिताएका छन्। जति जाडो भए पनि खप्ने, खट्ने यी ४८ वर्षेको इखलाई एउटै सपनाले भर दिएको छ– मेरा अनपढ बाउबाजेले जीवनभरि दिल्लीमै चौकीदारी गरे। चार छोरालाई चौकीदार बनाउँदिनँ, जसरी पनि पढाउँछु।
Posted by Basanta Basnet at 4:47 AM No comments:
पोखराबाट १७ किमी पश्चिम हुइँकिएपछि स्याङ्जाको फेदीखोला पुगिन्छ। कुभिन्डे भन्ने ठाउँमा गाडीबाट ओर्लेर पूर्वतिर तीन किमी उकालो चढेपछि आइपुग्छ साल्मेडाँडा। हिउँदयाममा पनि हरियाली बचाएर राखेको यो पहाडमा दुई दर्जन कामदार अहोरात्र खटिइरहेका छन्। उद्देश्य हो, गोरखा स्मारक निर्माण।
Posted by Basanta Basnet at 4:40 AM No comments:
Basanta Basnet / Raju Ghising
घडीको सुईले बिहानको ५:३० देखाउँदा झापा दमकका १४ वर्षे सेसेहाङ आङदेम्बेका परेली आफसेआफ खुल्छन् । हतार-हतार खाजा टिपेर उनी ६:३० बजे ग्वार्कोस्थित लोकस्मृति सेकेन्डरी स्कुल पुगिसक्छन् । शिक्षकले पढाउँदै गर्दा यी छात्रका आँखा त गुरुतिरै हुन्छन्, दिमाग भने फुटबल मैदानमै दौडिरहन्छ ।
१० कक्षाका यी छात्रको मन मिडफिल्ड र डिबक्सतिर दौडिइरहँदा कक्षा सकिसकेको हुन्छ ।
८:३० बजे कक्षाबाट निस्कँदा आमा जमुनाको फोन आउँछ ।
प्रायः सबै बाबुआमाले गर्ने प्रश्न एउटै हुन्छ- 'कस्तो पढ्दैछस् ? राम्ररी पढ ।'
केही बाबुआमा यस्ता पनि छन्, जसले पढाइभन्दा पहिले सोध्छन्, 'कस्तो खेल्दैछस् ? राम्ररी खेल ।' सन्तानको पढाइभन्दा पहिले खेलखबर सोध्ने थोरै आमामध्ये जमुना एक हुन् ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले आफ्नो मुख्यालय सातदोबाटोमा खोलेको एकेडेमीमा देशभरका २५ सयभन्दा बढी प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै छानिएर आएका १६ वर्षभन्दा कम उमेरका ५७ प्रशिक्षार्थी खेल्छन्, पढ्छन्, सँगै खान्छन् र सुत्छन् । दुई वर्षअघि छानिएपछि परिवार छाडेर फुटबलको संसारमा प्रवेश गरेका सेसेहाङ यिनैमध्ये एक हुन् । एक समयका चर्चित मिडफिल्डर बालगोपाल महर्जन उनीहरूका मुख्य प्रशिक्षक हुन् ।
चितवन एसओएसबाट छानिएर एन्फा आइपुगेका १४ वर्षे राजेश परियारको मनमा जतिबेला पनि फुटबल हुन्छ । 'पहिले-पहिले घरको यादले साह्रै सताउँथ्यो,' भन्छन्, 'अहिले त साथीहरूसँग खेल्दाबस्दा यहीं रमाइलो लाग्न थालेको छ ।'
Posted by Basanta Basnet at 4:31 AM No comments:
लेखक राजन मुकारुङ सृजनशील अराजकताको आन्दोलन चलाइरहेका बेला काठमाडौंबाट बेलाबखत धरान जाने गर्थे– सहकर्मी अभियन्ता कवि उपेन्द्र सुब्बालाई भेट्न। धरानको रौनक देखेर छक्क पर्थे। मारवाडी समुदाय बस्ने पुतली लाइनमा हिउँदमा धुलो उड्थ्यो, बर्खामा हिलो भरिन्थ्यो।
राई, लिम्बु भरिएको लाहुरे टोलमा भने एउटा पात, कागजको टुक्रामात्रै खस्यो भने पनि कुचो आएर सिनिक्क पारिहाल्थ्यो। नगरपालिकाको सफाई बाहन आउनुपर्थेन। दुई समुदायको सफाई चेतनाको अन्तर देख्दा मुकारुङ छक्क पर्थे। यो १५ वर्ष अघिको कुरा हो।
एकदिन। स्थानीय अखबारले दुई समुदायको सफाई चेतनालाई तुलना गर्दै टिप्पणी लेख्यो। त्यसले विवाद उत्पन्न गर्‍यो। स्थानीयहरुको प्रयत्नमा थामियो। तर यही कारणले दुई भिन्न समुदायलाई हेर्ने तुलनात्मक दृष्टि भने कायम रहिरह्यो।
'तिनताक ब्रिटिशहरुको क्याम्प थियो घोपामा,' मुकारुङ सम्झन्छन्, 'हाम्रो समुदायका युवायुवती बिगार्न तिनले सघाए, केटाहरु ड्रगिस्ट भए, केटीहरुलाई पनि मोडलिङ गर्नुपर्ने।'
त्यसले धरानमा विकृतिको प्रवेश गराएको उनी बताउँछन्। अर्को पत्रिकाले लेखेछ पनि, 'भित्ते र तिघ्रेको सहर।'
धरान नेपालको पहिलो सहर हो, जसले नेपालमा पहिलो पटक युरोपेली संस्कृति भिœयायो।
र, धरान नै नेपालको त्यस्तो सहर हो, जसमा युरोपेली अत्याधुनिक फेसनको चेतनासँगै जातीय आन्दोलन र चेतनाको बिज रोपिएको थियो। यसको कारण दुई भिन्न समुदायले आफ्नो राजधानी घोषणा गर्नु हो।
Posted by Basanta Basnet at 4:26 AM No comments:
राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले हालै एक लेखमार्फ् खतरनाक अभिव्यक्ति दिए, 'लोकतन्त्रको अबको विनाशक तत्व भनेका हामीले पत्याएका कथित् लोकतन्त्रवादीहरू नै हुन् । फ्या“किसकेको राजतन्त्र तथा राजावादी वा एकदलीय कम्युनिस्टहरू होइनन् । कांग्रेस, एमाले वा अरु कुनै बहुदलवादी दलको बिल्ला भिर्दैमा सबै लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैनन्, होइनन् पनि ।'
शिशु गणतन्त्रले पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दो शासकीय स्वेच्छाचारिताको मूल्य चुकाउनुपरिरहेको परिवेशमा आएको खनाल टिप्पणीलाई सदर गर्दै स्वयं सत्ताधारी कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली, प्राध्यापक अभि सुवेदीलगायतले लेखिरहेका छन् । संयोगको कुरा, लन्डनबाट प्रकाशित हुने 'द इकोनोमिस्ट' म्यागजिनले गत मे १० तारिखको अंकमा 'द लङ आर्म्स अफ् द ल' शर्ीष्ाकमा लेखेको छ, 'एसियाका अधिकांश पछिल्ला सरकारहरूले आफ्ना देशहरूमा शासकीय नियन्त्रण कायम राख्न कानुनलाई हतियार बनाउन थालेका छन् ।' स्थिर राजनीतिक पद्दति बसिनसकेका र बस्न लागेका थाइल्यान्ड, मलेसिया, पाकिस्तान, म्यानमार, श्रीलंकाजस्ता देशहरूको उदाहरण दि“दै 'इकोनोमिस्ट'ले दैनन्दिन राजनीतिमा अदालतहरूको अनावश्यक सक्रियताले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गराइरहेको उदाहरण पेस गरेको छ । म्यागजिनले यस पंक्तिमा चीन र सिंगापुरलाई पनि राखेको छ, जहा“ राजनीतिक स्थिरता त छ, तर अदालतलाई विश्वासमा लिएका अधिनायकले लोकतन्त्रको वृक्ष झन् झन् सुकाइरहेका छन् ।
अनौठो नमानिएको तर आजसम्मको नेपाली चुनावको इतिहासमा अनौठो मान्नैपर्ने एउटा प्रवृत्ति छ। शीर्ष र प्रभावशाली भनिएका 'ठूला' नेताहरू घरै बसीबसी जग्गाका कित्ताकाँट गरिरहेछन्। स्पष्ट पारिहालूँ, त्यो जग्गा निर्वाचन क्षेत्र हो। राणा शासकले आफ्नो चाकरी बजाउन आउनेलाई बिर्ता दिएझैं गरी ठूलाहरू आफूले आफैंलाई निर्वाचन क्षेत्रको बिर्ता दिइरहेछन्। त्यस्तो बिर्ता, जो दिलाउन उनीहरूले कसैलाई सोधिरहनुपर्दैन। कसैको चाकरी बजाउनुपर्दैन। कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा छँदैछ।
वाल्मीकि क्याम्पसमा उद्घाटित सम्मेलनको बन्दसत्र शुक्रबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु हुनुपर्ने थियो । सोमबार दिउँसोसम्म अनिर्णयको बन्दी रहेकोे सम्मेलनले यी पंक्ति लेख्दैगर्दासम्म दुईवटा काममात्र ग¥यो । एक, पुरानो केन्द्रीय कमिटी विघटन । दुई, अध्यक्ष मण्डलको घोषणा । दुवै कुनै उल्लेख्य काम होइनन् । यति गर्न अखिल र एमाले नेताले दुई दिन लगाए । तीन दिनका लागि भाडामा लिइएको प्रज्ञा भवनको हलमा नभ्याएपछि अहिले प्रदर्शनीमार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा सार्नुपरेको छ । यस अर्थमा अनेरास्ववियुको यो सम्मेलन मोबाइल महाधिवेशन बन्न पुगेको छ ।
Posted by Basanta Basnet at 4:12 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 4:11 AM No comments:
विश्वविद्यालयमा पढ्न देशभरिबाट विद्यार्थी जम्मा हुने कीर्तिपुर जाने बसमा बेलुकीपख खुट्टा राख्ने ठाउँ पाउन हम्मे पर्छ। लहरै राखिएका भरिभराउ सिटसँगै सहचालक दुई पंक्ति यात्रुलाई यसरी उभ्याउँछन्– मानौं उनीहरू इँटा हुन्, उनीहरूलाई एउटै सेटमा राखेर उनी घर बनाउन गइरहेछन्।
अफिसबाट, शहरबाट (कीर्तिपुरेहरू काठमाडौंलाई शहर भन्छन्) फर्किरहेका थकित, भोका र क्लान्त शरीरहरूबीच बसेका, उभिएका विद्यार्थी देशदुनियाँबारे आफूले बुझेसम्मको तर्क गर्छन्। कहिले हानथाप पर्छ, कहिले माथापच्ची। झरीमा भिज्दै गुडिरहेको बसभित्रका यात्रु बन्द छाताबाट तपतप चुहाउँदै उनीहरूको गफमा मग्न छन्। कोही कानमा इयरफोनको ठेडी घुसारेर निस्पृहता देखाइरहेका छन्।
यात्रुको चाप बुझेर हुनुपर्छ, कीर्तिपुर यातायातले पछिल्लो पटक दस नयाँ बस थपेको छ। यसै हप्तादेखि १९ रुपियाँको भाडा घटाएर १५ मा झारेको छ। 'जुग नसुहाउँदो काम गरेवापत' ऊ यात्रुबीच हाइहाइको पात्र छ। गाइँगुइँ सुनिन्छ, यो सुविधा 'सीमित अवधिका लागि' हो।
Posted by Basanta Basnet at 4:08 AM No comments:
संविधान सभाको दोस्रो चुनावमा भाग नलिने घोषणा गरेको नेकपा–माओवादीको भाषा बिस्तारै बदलिँदैछ। आफ्नो झण्डामा हँसियासँगै कोरिएको हतौडा आज उसका लागि शोषण र असमानताको जालोबाट लाखौं श्रमजीवीलाई मुक्त गर्न होइन, बरु तिनैको हकहितको मार्गचित्र कोर्ने संविधान सभाको चुनाव बिथोल्न प्रयोग हुँदैछ। चुनाव बिथोल्न हतौडा ताकिरहेका महासचिव रामबहादुर थापा 'बादल' को तस्बिरले यस्तै संकेत गर्छ।
बादलको यो तस्बिर देखेर एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) विरक्तिएको अर्को तस्बिर पनि अखबारहरूमा छापिएको छ। गुह्य वास्तविकता भने अर्कै छ। यो बेला चुनावको विरोध, सक्रिय बहिष्कार हुँदै बिथोल्ने वैद्य पक्षको चेतावनीले सबैभन्दा खुसी कोही छ भने त्यो प्रचण्ड नै हुन्।
काभ्रेको एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जनमुक्ति सेनाका पूर्वकमान्डर प्रचण्डले वैद्य माओवादीले चुनाव बिथोल्न प्रतिबुथ १० कार्यकर्ता खटाए एक हजार कार्यकर्तामार्फत् प्रतिरोध गर्न कासन दिएका छन्। उनी भन्छन्, 'चुनाव बिथोल्न आउनेलाई लखेट्नू।' कतिपय मतकेन्द्रमा कुल मतदाता नै एक हजार जना होलान्, नहोलान्। उनका कार्यकर्ता त्यसभन्दा बढी हुनुको अंकगणित बुझ्न समायोजनमा जान इच्छुक तत्कालीन माओवादीका लडाकु कति थिए भन्ने उनको दाबी र त्यसले सिर्जेको मनोवैज्ञानिक आतंक सम्झे पुग्छ। फरक यत्ति हो, उनको त्यस बेलाको दाबी लडाकु समायोजन, व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाका नाममा थियो। अहिले चुनावका नाममा छ।
Posted by Basanta Basnet at 4:06 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 4:04 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 4:00 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 3:57 AM No comments:
सहकर्मी सन्तोष न्यौपाने र म अघिल्लो शुक्रबार कपुरधारा पुग्दा अपराह्नको साढे चार बजेको थियो। स्थानीय तरकारी पसलमा कमिज सुरुवाल र ढाकाटोपी लगाएका एक प्रौढ भेटिए। हामीले सोध्यौं, 'माधवप्रसाद घिमिरेको घर कुन हो?'
'को माधवप्रसाद घिमिरे? कवि?'
'उहाँको घर थाहा छैन। बरु राजेश हमालको घरचाहिँ थाहा छ।'
'राजेश हमालको कुन हो?'
'ल, यस्तो पनि प्रश्न सोध्ने? बच्चालाई पनि थाहा भएको कुरो!'
हामी हाँस्दै अघि बढ्यौं। तरकारी बेच्दै गरेकी एक दिदीले घर देखाइदिइन्। केही उकालो पार गरेपछि रुख र फूलले सजिएको कविघर पुग्यौं। सेतो कमिज सुरुवालमा ठाँटिएका कवि घिमिरेको श्यामश्वेत तस्बिर बैठककोठामा मुस्कुरायो। कवि माथिल्लो तलाबाट फुत्रुक–फुत्रुक ओर्लिए।
Posted by Basanta Basnet at 3:49 AM No comments:
केदारभक्त माथेमालाई चिनाउनुपर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भन्ने गर्थे, ‘सुब्बा आदिभक्तका नाति'। र, सुब्बा आदिभक्तको नाम लिनेबित्तिकै भट्टराई भन्थे, ‘उहाँ मलाई ‘जोनी वाकर' चिनाउने मानिस।' त्यही भएर होला, मद्यपानलाई ‘जातैले पाएको' भन्न हिच्किचाउँदैनन् प्राध्यापक माथेमा, जो शिक्षाविद् र कूटनीतिज्ञका रूपमा परिचित छन्।
सम्पन्न आर्थिक पृष्ठभूमिका बाजे आदिभक्तले बनारसमा २० रुपैयाँमा रक्सी खुवाएका भट्टराईका लागि नाति केदारभक्तको कूटनीतिक चिनारी दोस्रो प्राथमिकता बन्न पुग्ने नै भयो। आखिर नाति अझै कडा निक्ले। जापानका लागि यी पूर्वराजदूत त खसोखास ‘डाइनिङ डिप्लोम्याट' दरिन पुगे।
आधुनिक कूटनीतिका दुई आत्मा मानिन्छन्– वाइनिङ र डाइनिङ। पश्चिमी कूटनीतिको वर्चस्व विश्वभरि रहेको परिवेशमा यी दुईको महत्व अझ बढेको छ। धेरैभन्दा धेरै राष्ट्र र संस्थाका उच्च पदस्थलाई खुवाउने, पियाउने, खानपिनमार्फत आफ्ना आकांक्षा स्थापित गर्ने– माथेमा यसलाई आधुनिक कूटनीतिको कला मान्छन्। ‘राम्ररी वाइनिङ र डाइनिङ गराउन सक्नु कला हो, घरमा बोलाएर डिनर खुवाउने कूटनीतिज्ञले नै राम्ररी काम लगाउन सक्छ,' उनी भन्छन्, ‘यो कलामा जो निपुण छैन, उसको कूटनीति कमजोर मानिन्छ।'
धेरै नेता र कूटनीतिक वृत्तका मानिसका आँखामा माथेमा यी दुवै कलामा निपुण छन्। उनले खानपिनका क्रममा ठट्यौली गर्दै भन्ने गरेका रहेछन्, ‘नेपालमा दुई किसिमका मानिस छन्, एकथरीलाई रक्सी भन्ने छुनै हुन्न। अर्काथरीलाई नभई हुँदै हुन्न।'
Posted by Basanta Basnet at 3:46 AM No comments:
प्रचण्डद्वारा एकताका आफ्ना राजनीतिक गुरु भनेर उच्चारित नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य 'किरण' समयक्रममा हाँसोका पात्र बन्दैछन्। यी 'नौलो जनवादी क्रान्तिका भाष्यकार' प्रति बचे/खुचेको जनसहानुभूति पूरै निखि्रसकेको छ। हिजोआज मानिस उनी र उनको दलप्रति जताततै क्रुर टिप्पणी गरिरहेका भेटिन्छन्– '...लाई चलाए गन्ध, वैद्यलाई चलाए बन्द।'
मंगलबार अपराह्नसम्म हेर्दा वैद्यको बन्द भूपी शेरचनको 'शुभ्र शान्त मैनबत्तीको शिखा' जस्तै छ। सडकमा गाडी गुडिरहेका छन्। ट्राफिक चाप कम छ। (ड्युटीधारी ट्राफिकहरू चुनावमा खटिएको मर्म काठमाडौंका गाडीवालाले बुझिदिएका पो हुन् कि!) सवारी साधनबाट उत्पन्न हुने कोकोहोलो र धुँवा घटेको छ। बन्द होस् त यस्तो! गाडी पनि चलेकै छन्, पसल पनि खुलेकै छन्। बन्द पनि जारी छ।
Posted by Basanta Basnet at 3:41 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 3:40 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 3:36 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 3:20 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 2:02 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 2:00 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 1:53 AM No comments:
Posted by Basanta Basnet at 1:51 AM No comments: